Fanararaotana ara-nofo: zazavavikely 5 taona roa indray naolana mpiambina telo lahy | NewsMada
Niharan’ny fanararaotana nofo nandritra ny fitadiavana ireo ray aman-dreniny teny an-tsena ny zazavavikely roa monina eny Ivato. Voa mafy tamin’izany ny iray ary mpiambina tsy lavitra teo ny isan’ireo voarohirohy ho nahavanon-doza.
Tranga tsy roa aman-tany. Zazavavikely miisa roa samy dimy taona avy ny naolan’ny mpiambina telo teny Ivato, andro vitsy lasa izay. Taorian’ny fanadihadiana sy ny fampanoavana, nampidirina vonjimaika am-ponja ny iray amin’izy telo lahy. Nahazo fahafahana vonjimaika kosa ireo namany roa.
Zanak’olona mpirahavavy ireo ankizivavikely roa ary samy monina eny Ivato. Mbola samy mpivarotra ihany koa ny asan’ireo ray aman-drenin’izy roa vavikely. Ny alarobia 7 okotobra kosa, tratra alina tany am-pivarotana ny ray aman-drenin’ireo zazavavikely. Roso nitady azy ireo tany an-tsena izy roa vavy, tokony ho tamin’ny 8 ora alina. Nifandiso anefa ireo mpianakavy ka tsy nifankahita intsony. Nandritra ny fotoana nitadiavan’ireo ankizivavikely ireo ray aman-dreniny, efa tafody tao an-trano ireto farany. Araka izany, taitra ireo olon-dehibe raha tsy nahita ireo zanany ka nikoropaka nitady ireo sombin’ny ainy niaraka amin’ny mponina eo an-tanàna.
« Tokony ho tamin’ny 11 ora alina, nahazo antso ireo ray aman-drenin’ireto zaza fa tonga any an-trano izy roa vavy », hoy ny fanazavan’ny Polisim-pirenena. Hita tamin’izany fa samy niharan’ny herisetra nofo ireo zaza. Tena voa mafy tamin’izany kosa ny iray amin’izy roa vavy. Vokany, nanatona ny centres Vonjy eny Befalatanana ireo ray aman-dreny nanao fizahana ireo zaza sady nametraka fitoriana olona tsy fantatra tamin’ny fanolanana nahazo azy roa vavy ihany koa. Nisokatra nanaraka izany koa ny fanadihadiana sy ny fikarohana ireo nahavanon-doza. Vokany, nidina teny ifotony ireo polisy misahana ny heloka mamoafady sy ny fiarovana ny zaza tsy ampy taona. Nandeha nanaraka izany ny fanangonam-baovao. Nipetrahan’ny ahiahy tamin’izany ny mpiambina telo lahy eny an-toerana. Nanaovana fanadihadiana ireo lehilahy ireo ary natolotra ny fampanoavana ny zoma lasa teo. « Marihina fa eo anatrehan’ny heloka bevava mihatra amin’ny zaza tsy ampy taoana toy izao, manokatra avy hatrany fanadihadiana ny polisy na misy fitoriana na tsia », hoy hatrany ny loharanom-baovao.